Saamayn intee la'eg ayuu Shiinaha ku leeyahay Zimbabwe? - BBC News Somali
Image caption Taliye Jeneraal Constantino Chiwenge oo shiinaha tagay maalmo ka hor afgambiga
Waxaa jiray warar aad la'isula dhexmaray kadib markii Shiinaha uu sheegay in uu si dhow ula socdo xaaladda Zimbabwe, balse uu ka gaabsaday in uu cambaareeyo in xilka laga qaado Mugabe.
Labada dal ayaa xiriir dublamaasiyadeed yeeshay markii Zimbabwe ay xornimada qaadatay sanadkii 1980-kii, kadibna uu Mugabe booqasho ku tagay magaalada Beijing isaga oo Ra'isulwasaare ah.
Image caption Mugabe iyo Xi oo kulmay
Balse muran labada dal dhexmaray sanadkii 2008-dii oo ku saabsanayd shixnad hub ah, ayaa waxa uu Shiinaha go'aansaday in uu hoos u dhigo ganacsiga hubka ee uu la leeyahay Zimbabwe.
Image caption Maj Gen Sibusiso Moyo oo u hadlay ciidammada Zimbabwe ayaa sheegay in waxa dhacay aysan ahayn Afgambi